Agwa mmanu: uru na nsogbu, njirimara bara uru na contraindications, jiri ọgwụgwọ agwọ ọrịa na ihe ịchọ mma - Ugu - 2019
Mmiri mmanu nwere ọtụtụ ihe ndị dị oké mkpa maka ahụ mmadụ. A na-enweta ngwaahịa a site na akwukwo nri site na ịpị oyi. N'iji nlezianya bia, ngwaahịa ahụ na-ejide vitamin na mineral ndị kasị baa uru. Dika ngbachapu ya, enwere oji mmiri dika ocha na agba ocha nke nwere odo odo; n'oge ochie ana akppo ya "odo odo". N'oge a, mkpụrụ osisi a na-amị mkpụrụ na-eji ya eme ihe na nkà mmụta ọgwụ na omenala ndị ọzọ, nri na cosmetology. Ma banyere uru nke ngwaahịa a, yana njedebe na usoro nke ngwa, anyị ga-ekwu okwu ọzọ.
Ị ma? Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-ekwu na ndị Mexiko toro eto iri afọ abụọ gara aga. Na Russia, akwukwo nri weere anyị nanị narị afọ anọ gara aga.
Gini mere mmanu ogbe ugbo ji bara uru?
Maka ndị mmadụ
Esi eji nri
Otu esi eji maka ọgwụgwọ na nkwalite ahụ ike
Maka nrịkasi obi
Na oke na afo
Site na nsị ahụhụ na ọrịa anụahụ
Na veicose veins
Na nsogbu nwanyi
Kedu ka a ga-esi eji mee ihe n'ụlọ
Enwere ike itinye ya?
Otu esi achọputa ngwaahịa mgbe ịzụrụ
Ihe dị n'ime
Iji nyochaa uru nke ngwaahịa ahụ, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na ihe ndị o mere. Mkpụrụ mmanụ mkpụrụ osisi nwere ihe bara uru bara uru:
vitamin A (retinol), B1, B2, B6, C, E (tocopherol), K (rutin), P, PP;
ukwuu ọrụ ihe: phospholipids, carotenoids, phytosterols, tocopherols, flavonoids;
mineral, micro- na macro-components: magnesium, selenium, cobalt, ígwè, calcium, zinc, phosphorus, potassium, wdg;
ihe bara uru acids fatty: vitamin (F), omega-3 (linolenic) na omega-6, stearic, palmitic.
O yiri ka nke a bụ ihe nkịtị zuru oke, mana ọ bụ ego nri nke ọ bụla nke ngwaahịa nke na-enye echiche iji tụlee mmanụ ugu ka ọ bụrụ ezigbo ọgwụgwọ. Na nke a, n'eziokwu, na-akọwa nnukwu atụmatụ nke ngwa ya.
Ihe niile a kọwara nke ọdịnala ọdịnala na-eji ihe eji agwọ ọrịa ọtụtụ ọrịa, iji dozie nsogbu na arụ ọrụ nke eriri afọ, imeju na akụrụ. Ngwakọta pụrụ iche nke micro na nnukwu igwe na-enyere aka wepu bile ma weghachite mkpụrụ ndụ imeju, mgbe ọ na-echebe megide nsị ọdụdụ na mbufụt.
A na akwadoro ngwaahịa a nke ugu maka:
urolithiasis ma ọ bụ nkume na gallbladder;
mmanya na-aba n'anya na imeju;
mbufụt nke gallbladder;
A na-eji mmanụ eme ihe na-agwọ ọrịa ma na-alụ ọgụ n'ụzọ na-alụ ọgụ megide ọnyá nke membranes mucous, ya mere, a na-edere ya maka ọrịa na akụkụ eriri afọ.
Anyị na-enye ndụmọdụ ka ị gụọ banyere uru nke ugu na ugu osisi.
N'ihi ọdịnaya dị elu nke vitamin B, ịmepụta site na ugu osisi na-eme ka mmepụta nke ihe ọṅụṅụ nke gastric mepụta, na-edozi gastritis, ọnya, enterocolitis, esophagitis. Otú ọ dị, ngwaahịa a ga-enyere afọ ojuju na obi nkoropụ. Ọzọkwa, a pụrụ iji mmanụ ugu mee ihe dị ka ọgwụ mgbochi-parasitic. O nwere mmetụta bara uru na usoro obi. Ọ na-eme ka e nwee nnukwu ngwa ngwa na obere ụgbọ mmiri, ma na-enye aka belata nsị. Tụkwasị na nke a, ihe a na-agwọ ọrịa na-eweghachi cholesterol nkịtị, na-ekpochapụ ihe dị n'ime ala, na, dị ka a rụpụtara, mee ka ọbara gbasaa.
Ihe ndị dị ka ígwè na zinc na mmanụ na-amụba n'ọtụtụ hemoglobin, na magnesium na potassium nwere mmetụta bara uru n'obi. Ọ bụ ya mere oriri nke mmanụ ugu bụ ihe mgbochi kachasị mma maka mmepe nke mgbu obi, ọrịa anaemia, ọbara mgbali elu, ọrịa strok na ọrịa obi ndị ọzọ na ọrịa obi.
Ị ma? Ndị na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa na-atụ aro ka ha were mmanụ mmanụ n'etiti 7 na 9 elekere. Ọ bụ na nso nso a na pancreas enwebeghị oge itinye aka na usoro nsị.
A na-akpọ phytosterols phytohormones. Ha bụ akụkụ nke mmanụ ugu na-enyere aka ịkwụsị ihe mgbu n'oge ihe mgbu na oge na-adịghị mma.
Uzo ogwu di iche iche nke phytosterols eji eme ihe maka ogwugwu oria gynecological (mbufuru nke ovaries, cervix, vaginitis, wdg).
Ndị ikom nke ndị bi na ya nwere ike ịṅụ mmanụ mmanu dị ka ụzọ dị iche iche maka ịnọgide na-enwe ike nwoke. Ọ bụghị nanị na ọ nwere mmetụta diuretic dị ike, kama ọ na-alụso ọgụ ọgụ ma na-ebelata etuto ahụ.
Ihe dị mma na-emetụtakwa ihe ojiji nke hazel, ginger, horseradish, thyme, saffron, asparagus, ose dị ụtọ, egusi, scorzoner, periwinkle, pasili, onye na-agba agba garlic, fenugreek, orchid, mmiri Icelandic, nutmeg.
Ezi mmetụ nke zinc na vitamin A na-eme ka arụ ọrụ nke ụmụ nwoke gland, na vitamin E nwere mmetụta dị irè n'ahụ ike, na-agbatịkwuo ere, ma na-emezi usoro nke spermatogenesis. Tụkwasị na nke a, a pụrụ iji ọgwụ ọjọọ a mee ihe dị ka prophylaxis nke adenoma na mbufụt nke prostate, adịghị ike na ngwọta nke akụrụ.
N'ihi ihe ọkụkụ ya pụrụ iche, ngwaahịa a nwere ike ịgbanwe ụtọ nke efere nkịtị. E nwere ike itinye aka na:
efere efere nri;
poteto a kụrụ esi na poteto ndị a kụrụ agwa;
anụ na efere azụ;
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-agbanye mmanụ na efere, ị ga-anwale ka ị ghara ime ya - 2-3 tụlee.
Ọ dịkwa mkpa icheta na a gaghị etinye mmanu na nhazi okpomọkụ ma ọ dị mkpa iji jupụta efere nri tupu eji ya, nke mere na ọ dịghị oxidize na anaghị emetụta uto nke nri. Nlekọta a na-emeghị nke ọma nwere ụtọ uto na aro ísì.
A na-eji ngwaahịa mmanụ bara uru dị ka ụzọ ọzọ maka isi ọgwụgwọ, n'ihi na, na mgbakwunye na ọrụ ya, mmanụ na-enyere aka iwalite mmetọ ụmụ mmadụ n'oge ọ bụla.
Na oge opupu ihe ubi na mgbụsị akwụkwọ, mgbe nsogbu nke influenza na nnukwu ọrịa nje respiratory na-arịwanye elu, ị nwere ike ịṅụ otu teaspoon nke ọgwụ na ahụike ugboro atọ n'ụbọchị.
Iji mejupụta ike na ike nke ahụ, ị ​​nwere ike ịṅụ ihe a mejupụtara maka ụbọchị 10-12: 1/3 teaspoon nke garlic chara acha na ½ teaspoon nke gwakọtaa mkpụrụ mmanụ ugu ka esi diluted na 200 ml mmiri.
Mgbe rhinitis ma ọ bụ ọrịa rhinitis na-adighi ahụ nwere ike ịkụnye n'ime imi maka 5-7 tụlee. Mee ka mmetụta ahụ dịkwuo ike site n'ịgwa otu teaspoon mmanụ 60 nkeji tupu nri.
A na-ewere mmanụ mmanu ogologo oge dị ka onye na-arụ ọrụ na-eme ka ndị omekome na-arụ ọrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ isi kpochapụ ikpuru na enyemaka nke ugu mkpụrụ wepụ:
Kwa ụbọchị na afo efu iji were teaspoon. Iji mezuo mmetụta ahụ, ọ bụ iji ṅụọ ihe dị ka 500 ml nke ngwaahịa ahụ n'ozuzu ya.
A na - eji teaspoon nke mmanụ gbanwere na ½ teaspoon nke ihe ọṅụṅụ lemon. Ṅụọ na afọ efu.
Na mmanya na-abaghị uru ṅụọ otu teaspoon nke bọta ma weghara garlic.
Mgbe ha na-alụ ọgụ na ikpuru, ha na-ejikwa canoper, elecampane, ọlaọcha-sucker, zucchini, amaranth tụghachite, eyịm, aspen, na wormwood.
Mgbe ị na-alụ ọgụ na ikpuru, ọ dị mkpa icheta na a rụpụtaghị ya n'otu ntabi anya, ya mere a ghaghị imeghachi usoro ọgwụgwọ ụfọdụ n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ọkụ na esophagus bụ ihe na-adịghị mma nke nwere ike iwepụ n'ọtụtụ ụzọ:
Naanị ihe ọṅụṅụ 1-2 teaspoons nke ugu mmanụ.
N'ihe banyere ikpe nrịkota azu ugboro ugboro, gwerie 2-3 cloves garlic ma gbakwunye ½ iko mmanụ. Tinye nchịkọta a maka ụbọchị 7 na ebe gbara ọchịchịrị. Were 1-2 teaspoons.
Enwere ike iwepu nrekasi obi site n'enyemaka nke resini, unere, ogwu, centaury, akwukwo ohia nke akwukwo ato, gentian, akwukwo akwukwo, anu ahihia, chestnut na chestnut honey.
N'ihi ezigbo ụlọ choleretic, ọkpụkpụ nke osisi ugwo nwere ike ime ma ọ bụrụ na a na-ahụkarị na gallbladder na cholecystitis. Ọ dị mkpa ịṅụ ihe dị ka ụbọchị iri anọ na-eri otu tablespoon nke gwakọta otu awa tupu nri. Usoro a ga-enyekwa aka na ọrịa na-egbu egbu nke imeju na cirrhosis.
Ọ dị mkpa! Mgbu dị n'aka nri nwere ike ịpụta ijegharị nkume. Na ọnọdụ a, usoro onunu ogwu na-ebelata ½ tsp.
Maka ọrịa nke pancreas, ọtụtụ na-eji ọgwụgwọ ike, ọbụna na-eche na obere ugu nwere ike inyere ha aka na nke a. Ihe ndị dị na ya belata acid ma nye aka weghachite ọrụ nchịkọta. Ọgwụgwọ a gụnyere ịṅụ teaspoon mmanụ na afọ efu na ụbọchị ọ bụla.
Iji kpochapụ mmetụta a na-adịghị mma, nakwa nke gastritis, ị nwere ike iwepụta ngwakọta a: egbutu ahịhịa nke St. John wort na yarrow (1: 1) wunye ½ iko nke mmanụ ugu ma na-esi ọnwụ na ebe gbara ọchịchịrị ruo ụbọchị asaa. Ọfọn, ma ọ bụrụ na ikike ahụ bụ ọchịchịrị, okpomọkụ anaghịkwa elu karịa + 15 Celsius. Na-aṅụ ọgwụ a na teaspoon, minit 30 tupu nri.
Site na antiseptik na ọnya-agwọ ọrịa, ọgwụ a na-agwọ ọrịa na-enyere aka ịkwụsị mmịnye mgbe ụmụ ahụhụ na-ata ya ahụhụ ma nwee mmetụta dị ebube maka ịgwọ ọrịa nke obere ncha, abrasions na bruises. N'ọnọdụ ndị a nile, ebe a na-agwọ ọrịa na-atachasị ihe, idobe ole na ole tụlee na swab.
Ị ma? Na emepechabeghị emepe na Europe, 200 ml nke mmanụ ugu dị ka ọnụ ahịa maka mgbanaka ọlaedo.
Iji weghachite elasticity nke arịa ọbara na veins, ị nwere ike iji ihe na-esonụ: mmanụ na-agwakọta ya na garlic garlic na-etinye na teaspoon kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na veinsose veins na-ama na-agba ọsọ ụdị (ọnya ụdị), mgbe ahụ ị nwere ike iji ndị na-esonụ uzommeputa: 40 g nke burdock mgbọrọgwụ wunye ½ iko mmanụ wee 15 nkeji na mmiri saa. Ihe ngwakọta ndị a na-eme ka akụkụ ahụ metụtara. Chekwaa ọgwụ na ngwa nju.
Mgbe nsogbu gynecological (ebili mmiri, colpitis) ga-enye aka nchịkọta a: owu na-acha gauze na-ekpocha na mmanụ ugu ma gbanye n'ime ikpu n'abalị. Usoro bụ 15-20 ụbọchị.
Ọ dị mkpa! Ndị ọkachamara na-ekwu na, site n'inweta ọgwụ ndị ọzọ na teaspoon n'ime, n'ụtụtụ na ná mgbede, enwere ike ịmepụta mmetụta ahụ.
Maka mbufụt, nakwa iji gbochie prostatitis na ọrịa cancer prostate, ndị mmadụ nwere ike iri ụbọchị iri atọ na pasent abụọ nke mmanụ mmanu tupu ha eri.
Enwere ebe maka mmanu ugu na ubi ogwu. Ọ na-eme ka ntutu dị ike na-agwọkwa akpụkpọ ahụ.
N'ihi ihe omuma ya, ngwaahịa a na-eme ka bọmbụ ahụ na-arụ ọrụ, na-amanye ọbụna ntutu isi na-eme ka ọ gbakee ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ha na-agbanwe, akpụkpọ ahụ na-aghọkwa ihe dị ọcha karị, nke na-egbochi dandruff.
Iji ogbe mmanu eme ihe mgbe nile, ma n'omume di nma na dika ihe ndi ozo, ga-etinye n'ime mmanu ihe ndi ozo kwesiri ime ya, na-eme ka o di nma ma na-agbanwe.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị bara uru ga-enyere aka igbochi ọdịdị nke netwọk vascular, kpochapụ akpụkpọ ahụ ma wepụ ebe ndị a na-edozi:
Nkpu maka otutu na purulent formations. Efrata: mmanụ ugu - 10 g, ụrọ ụrọ - 40 g, pawuda - 1 njuaka. A na-agwakọta ya ma jiri ya mee ihe maka nkeji iri na ise na ihu ya, nke e ji akwụkwọ mmiri rye.
Nkpuchi na-agbanyeghachi. Dichaa ákwà na-ekpo ọkụ na mmiri, tinye otu mmanụ mmanụ ma tinye ya ihu na olu maka minit 30, kpuchie ya na akwa nhicha n'elu. Frequency - otu ugboro n'izu 1-2.
Na mmanu mmanu akpụkpọ. Efrata: agbazere mmanụ aṅụ - 1 tablespoon, oatmeal - 1 tablespoon, 6-8 tụlee nke bọta. A na-agwakọta ihe niile, a na-etinye obere mmiri ma tinye ya n'ahụ anụ dị ọcha maka minit 15. Mgbe nke ahụ gasịrị, kpochaa mmiri ọkụ.
Mgbe ha nyochachara ihe ngwọta nke ngwaahịa ahụ, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ime ya. Naanị enwere ụfọdụ nke ndụ, mgbe onye ọ bụla ga-eji nlezianya na nlezianya tụlee nhọrọ nke otu ọgwụ. Ọ nwere ike ịmalite iji mmanụ ugu mee ihe maka ndị na-agba mgba ma ọ bụ na-akwadebe ịghọ nne?
Ụmụ nwanyị nwere ike iji ngwaahịa ahụ na ọbụna mkpa ya. Nkwekọrịta na-aghọ ihe dị mkpa n'oge oge mgbụsị akwụkwọ-n'oge oyi, mgbe ahụ chere na ọ dị mkpa maka nchebe na vitamin ndị ọzọ.
Ngwaahịa a ga - enyere ndị nne na - atụ anya:
meziwanye ọnọdụ nke ntu ahụ, ntutu isi, anụ;
na-emeso ọgwụ ọjọọ;
wepu oke mmiri (ma, ya mere, gbochie mmepu).
Site n'iji ya eme ihe mgbe nile (otu teaspoon nke ụtụtụ na ụfụ efu) nke elixir mmanụ n'ime ụmụ nwanyị, ihi ụra na ọrụ nke usoro ụjọ ahụ na-ahazi. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ 3 teaspoons kwa ụbọchị, ị nwere ike iwepụ constipation.
Ngwaahịa a nwere ike iburu onye ọ bụla chọrọ ịkwụsị ibu, n'ihi na ọ bụ nri, na karịa ihe niile, n'ihi ike ịhapụ ahụ si toxins. Echefula na mmanụ ugu nwere ọgaranya, na-enweghị nke ahụ na-enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla. Ọ bụ iji ọgwụ a na-eme ka ị nwee ike ịjupụta ụkọ nke ihe bara uru na nri ndị na-egbochi ya.
Ya mere, n'okpuru ngbochi ọ bụla, ngwaahịa mmanụ a dị ezigbo mkpa. Akuku kachasị mma nke mmanụ ugu maka ndi choro ida ibu bu ike igbusi abuba.
Ghọta onwe gi na uru bara uru nke ube oyibo, kloovu, cumin cumin, opuntia na mmanu citronella.
Iji nweta ngwaahịa ọgwụgwọ n'ezie, ọ dị gị mkpa ịmụta otú ị ga-esi họrọ ya n'ụzọ ziri ezi. Iji mee nke a, soro iwu ndị a:
Ogwe ahụ ga-abụ tin ma ọ bụ iko gbara ọchịchịrị.
Ihe ịrịba ama nke ihe okike na ezigbo mma - akara nsị na-aba ụba na mgbidi nke akpa mgbe ịkwanye.
Agba na-adabere n'ogo nke ìhè, nke ahụ bụ, ọ nwere ike ịdị iche (ọlaedo, greenish), ma n'ọnọdụ ọ bụla ọ jupụtara ma buru ibu.
Okpokoro - naanị oyi, na-enweghị usoro okpomọkụ.
E kwesịghị ịgwakọta mmanụ ndị ọzọ. Ihe dị n'ime ngwaahịa bụ 100%.
Igwe okwu pụtara na ọ bụ naanị mkpụrụ osisi ma ọ gaghị enwe ísì ndị ọzọ.
Lezienụ anya n'ụbọchị ahụ, gbalịa inweta mmanụ ọhụrụ.
Ejila mmanụ mgbe ụbọchị njedebe gasị. Ee, ọ ghaghị ịchekwa ya n'ọnọdụ ụfọdụ:
ebe dị mma (+ 10-15 ° C);
Ọ dị mkpa! Tụkwasị na nke a, a ghaghị ilekọta na ọ dịghị ihe mgbochi na ngwaahịa ahụ. Na nke a, enweghi ike itinye ya n'ọrụ.
O di nwute, ihe puru iche nke mmanu nwere ike obughi nani ogwugwu, kama o na-emeru ahu aru. Otú ọ dị, ọ dị mma ịchọrọ na ngwaahịa a na-emetụta ọnọdụ ahụike ma ọ bụrụ na eji ya eme ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ dosages karịrị.
Ejila mmanụ n'ihu ọrịa ndị dị otú ahụ dị ka ọrịa shuga, na enweghị onye na-ekweghị n'ihe ọ bụla. Naanị mgbe gị na onye ọkachamara ga - aga n'ihu, ị ga - ewere mmanụ ugu maka ndị nwere cholelithiasis na nnukwu ogbo, ebe ọ bụ na ngwaahịa ndị ahụ nwere ike ibuteghachi. Mgbe afọ ọsịsa na-adịghịkwa ewere mmanụ ugu - o nwere mmetụta dị ike nke laxative. N'ịkọwa elu, m ga-achọ ịma na ntinye mmanụ na mmanụ aṅụ ga-enyere aka ọ bụghị nanị iji weghachi ahụike, kamakwa iji chekwaa mma. Anyị nwere olileanya na ntụziaka akọwapụtara ga-enyere aka na nke a.
Usoro nke ozuzu nke acacia
Ndepụta nke iche iche nke afọ varieties na nkọwa
Olee otú esi akụ na-eto eto tomato "Bullfinch"
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn: ihe dị mma na ihe ọ na-emeso, otu esi eji ma jiri